Soodejinta Si Loogu Talagalay Barnaamijka Kaydinta Isticmaalka Wanaagsan ee Bilaashka ah
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu heli karo xogta laga helo blogyada iyo goobaha aad doorbidayso.
. Qaar ka mid ah farsamooyinka isdifaacidda waxay ku habboon yihiin horumarinta iyo ganacsatada halka kuwa kale loogu talagalay kuwa aan barnaamijka ahayn iyo kuwa xorta ah. Webka xoqidda waa farsamo adag oo soo noqnoqda xogta aan haboonayn ee ku jira macluumaadka habaysan - tour ica pisco paracas. Waxaa la hirgeliyaa oo keliya marka aan isticmaalno software iyo qalab lagu kalsoon yahay. Qalabahan soo socda waxay la macaamilaan goobaha waxayna muujiyaan xogta waxtar leh ee foomka habeysan.
1. Quruxda quruxda badan:
Maktabada Python waxaa loogu talagalay in lagu xoqo faylasha XML iyo HTML. Waa sahlan tahay in lagu rakibo quruxda quruxda badan haddii aad isticmaasho nidaamka Ubuntu ama Debian.
Soo dejinta. Io waa aalado xawaalad lacag la'aan ah oo noo ogolaanaya in aan xoqno xogta laga helo goobaha isku dhafan iyo kuwa sahlan oo u diyaargaroobaya dataset. Waxaa ugu wanaagsan ee loo yaqaano casriga casriga ah iyo user-saaxiibtinimo.
Mozenda waa mid kale oo faa'iido leh oo cajiib ah shabakadda shabakadda barnaamijka fududeynaya inaan xoqno xogta oo aanu ka soo qaadno waxyaabaha ka yimid goobo badan. Waxay ku imanaysaa labada lacag oo bilaash ah oo lacag ah.
ParseHub waa aaladda shabakada muuqaalka sawirta ee ka caawisa xoqidda qoraalka iyo sawirada labadaba. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijkan si aad uga hesho xogta wargeysyada, dekadaha safarka, iyo dukaamada internetka.
Octoparse waa macmiilka shabakada dhinaca macaamiisha ee shabakada Windows. Waxay u gudbin kartaa xogta aan haboonayn ee foomka habeysan iyada oo aan loo baahnayn codad. Way u fiican tahay labada barnaamijka iyo kuwa horumariya.
CrawlMonster waa barnaamij cajalad bog ah oo cajiib ah oo u adeega sidii boodhadh iyo shabakadda webka. Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa khabiiro SEO ah waxayna kuu oggolaaneysaa in aad si fiican u sawirto goobaha.
Xiriirisku waa aaladda gawaarida ee shabakada. Waxaad ubaahan tahay inaad codsato wadatashiga oo aad siiso tusaalooyin ku saabsan sidaad u rabto xogtaada in la soo saaro.
8. Xoogga Guud:
Guutada Guud waxay na siisaa datasets wax ku ool ah oo loo isticmaali karo in lagu dhajiyo websaydheena. Waxa kale oo ku jira xog cayriin ah, iyo maadooyinka la soo saaro si loo hagaajiyo darajooyinka mashiinka raadinta goobta.
Crawley waa shabakad fool-ka-fool ah iyo adeeg ka saarista xogta oo xoqin karta goobo kala duwan, iyaga oo xogahooda xogta u rogaya qaab qaabaysan. Waxaad natiijooyinka ku heli kartaa qaababka JSON iyo CSV.
10. Qaabdhismeedka Macluumaadka:
Macluumaadka Xirfadlaha waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee shabakadda. Waxay u ogolaaneysaa abuurista habboon ee wakiilada warshadaha shabakada ee kaliya.
Diffbot waa labadaba aaladda kaydka xogta . Wuxuu boggagaaga kuugu soocayaa API-ga, wuxuu ku siinayaa natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
13. Isticmaalka Macluumaadka Isticmaalka Studio:
Xogta Macmiilka Isticmaalka Studio waxay ka soo saartaa xogta laga helo HTML, XML, dukumentiyada PDF iyo sidoo kale bogag badan oo websaydh ah. Hadda waxaa loo heli karaa dadka isticmaala Windows.
FMiner waa sawirka sawirka sawir-qaadaha iyo shabakada duubista shabakada oo kuu ogolaanaysa inaad mashaariicda ka dhisto doorashadooda.
Grabby waa adeeg adeega shabakada internetka oo loo isticmaali karo in lagu xoqo macluumaadka cinwaanada emailka iyo bogagga internetka. Waa barnaamij barnaamijka ku salaysan ee udub-dhexaad u baahan oo aan loo baahneyn si loo helo waxyaabaha la qabtay.